बिक्री को लागि चर्च हाउस, एक चर्च मा लाइव होम | विशेष खोजहरू
घर » बिक्री को लागि चर्च हाउस, एक चर्च मा लाइव होम
अधिक से अधिक मान्छे चर्च घरों को मांग को लागि खोज रहे हो।
यदि एक उपन्यास मा रहन हो या एक घर मालिक संघ संग समुदाय संग तपाईंको कुरा होइन; यदि तपाईं एक अनौपचारिक जीवित ठाउँमा बाँच्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं एक चर्चको घर किन्न खोज्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ जुन वास्तुकला तत्वहरू प्रदान गर्दछ जुन अक्सर खोजी गर्न र महंगा, खरीद, र स्थापना गर्न महंगी चुनौती प्रदान गर्दछ।
तपाईंको अर्को घर बनाउन चर्च खोज्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ तर सजिलो हुन सक्छ।
अध्ययनहरूले देखाउँछ कि चर्चहरूको अचम्मको संख्या प्रत्येक वर्ष आफ्नो ढोका बन्द गर्दछ। यो अनुमान गरिएको छ कि 6,000 र 10,000 चर्चहरू बीच प्रति वर्ष केवल संयुक्त राज्य अमेरिका मा बन्द! यसले धेरै चर्चहरू छोड्छ, प्रायः त्यागिएको छ जुन आश्चर्यजनक र असामान्य चर्च घरहरूमा परिवर्तित हुन सक्छ।
उनको पुस्तक मा "त्यागिएको अमेरिका"फोटोग्राफर मैथ क्रिस्टोफरले संयुक्त राज्य अमेरिका वरिपरी धेरै त्यागिएको चर्च भवनहरू चित्रण गर्दछ। यो सानो बायाँ चित्र को बायाँको क्यालिफोर्निया मा बोडीमा स्थित छ। यसले एक पूर्ण चर्च घर बनाउन सक्छ!
तपाईंको चर्च गृह को व्यस्त स्थान मा हुनु पर्छ
अधिक भन्दा प्राय: चर्चहरू जुन अब प्रयोग गरिंदैन भने ग्रामीण इलाकाहरूमा अवस्थित छन्। जब आपरेशनमा, उनीहरूको सानो मण्डली भएको थियो जुन अर्को चर्च सँग मेल खाएको थियो। म एक क्षेत्रमा बस्छु जहाँ त्यहाँ तीनवटा मण्डलीहरू एउटै सेवकले सेवा गरिरहेका थिए। प्रत्येक मण्डली पन्द्रह भन्दा कम सदस्यहरू थिए त्यसैले मंत्रीले हरेक आइतबार तीनवटा सेवा गरेका थिए। अन्ततः, एउटा मण्डली बेचेको थियो र अर्को दुई मर्ज गरियो। एउटा चर्च खाली आज बस्नुहुन्छ। यी तीनवटा संरचनाहरू सानो देशका चर्चहरू थिए र सबै नजिक थिए, तर आवास गृह उपनिवेश भित्र थिएन। त्यो ठाउँ जहाँ चर्चहरू स्थित थिए त्यहाँ उप-विभाजनहरूको नजिकको कारण मूल्यवान थियो। प्रत्येकले एक राम्रो चर्च घर बनाउनुभएको थियो।
चर्चहरूमा प्रायः पहिले नै आर्किटेक्चरल विशेषताहरू जस्तै दाग-कांच विन्डोहरू समावेश छन् जुन असामान्य तीर वा गोथिक सञ्झ्याल फ्रेमहरूको साथमा एक कोठामा एक रोशनीको मात्रामा अनुमति दिन्छ। यो ठुलो काठ बीम र एक ठूलो अभयारण्य जुन एक साँच्चै राम्रो कोठाको रूपमा सेवा गर्ने को लागी सामान्य छ! यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईं एउटा चित्रकारी छत र चर्चलाई पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ! अक्सर चर्चमा एक व्यावसायिक भान्सा हुनेछ। यी सबै तत्वहरूले अचम्मको चर्च गृह रूपांतरणको सम्भावना सिर्जना गर्छन्।
वर्षौंको दौडान हामीले थुप्रै मण्डली र चर्चको घर बिक्री गरेका छौं। त्यो संख्या बढ्दै गएको छ जब हामी अहिले तीन धेरै फरक छ र धेरै अनोखी चर्च घर बिक्रीका लागि छ!